Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Brand USA mitazona an'i India amin'ny radarany virtoaly
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Sarivongan'ny fahalalahana hita avy amin'ny sambo Circle Line, Manhattan, New York
Ny tsena eran-tany amerikanina Brand USA dia miavaka amin'ny lafiny maro, ary tsy ny kely indrindra dia nampitaina tamin'ny hafatra mafy sy mazava ho an'ireo mpandeha amin'ny dia sy mpizahatany India fa matotra i Etazonia amin'ny famerenana ny tsenan'i India, rehefa tafaverina eo amin'ny toerany ny dia. asio COVID.
Brand USA dia nanao fivoriana virtoaly tamin'ny 11 Aogositra 2021, niaraka tamin'ny mpiaramiombon'antoka amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any India.
Nohamafisin'ny Brand USA fa efa teo amin'ny radara foana i India.
Samy miandry fatratra ny fandrosoana amin'ny fizahan-tany, fizahan-tany, fiaramanidina, fandraisam-bahiny, na iza na iza solontenanao, ny solontenan'i Etazonia sy India.
Na dia nandritra ny vanim-potoana COVID aza dia nitohy ny fandaharan'asan'ny Etazonia momba ny zava-mitranga any India. Tamin'ny famelabelarana ny 11 aogositra 2021, izay nampivondrona, tao anaty sehatra virtoaly, mpitarika ambony ny fizahan-tany sy fizahan-tany avy any India, Brand USA dia niresaka ny fikasana hampiroborobo sy hivarotra an'i Etazonia any India. Nanamafy i Brand USA fa teo amin'ny radara foana i India, ary ny mpanolotra hevitra tamin'io fivoriana io dia nanome ny zava-misy sy tarehimarika hampahatsiahivana ny mpijery fa ny isa alohan'ny COVID dia tsy vitan'ny fa ho mihoatra lavitra azy ireo.
Eo amin'ny lafiny fifandraisana, mihatsara ny zava-misy miaraka amina sidina bebe kokoa, indray mandeha, rehefa vita ny tohiny. Ireo tompon'andraikitra ambony avy any Brand USA dia teo mba hilaza amin'ny mpilalao India fa misy zavatra iraisan'ny firenena 2 hanamafisana ny dia. Ny ankolafy India tamin'ny fivoriana virtoaly dia notarihin'i Sheema Vohra izay efa ela no nitarika ny fampiroboroboana Etazonia tany India.
Fiofanana momba ny varotra dia
Amin'ny alàlan'ny Brand USA, ilay nahazo loka USA Discovery Programme dia nitombo 64% tamin'ny fampitahana isan-taona. Ny programa dia manolotra tranonkala web fanabeazana sy manentana fanahy ary efa nampiofana agents 10,113 2020 hatramin'ny taona XNUMX ka hatramin'izao.
Ny tsenan'i India
Amin'ny 2019, 1.47 tapitrisa Mpitsidika indianina nandeha nitety an'i Etazonia, nanome 14.2 miliara dolara ho an'ny harinkarenan'i Etazonia. Ny volan'ny mpitsidika avy any India dia nidina 77% tamin'ny taona 2020 raha tsy tamin'ny 2019, raha 45% kosa ny fandaniana. Tamin'ny volana Jona 2021, ny totalin'ny dia mpandeha an'habakabaka avy any ivelany mankany Etazonia dia nihena 59% raha oharina tamin'ny Jona 2019.
India Visitor Profile
Amin'ny taona mahazatra, fanjakana 18 no mahazo 2% na mihoatra ny totalin'ny mpitsidika India. Izany dia manohana ny ezaky ny Brand USA hampirisika ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena any amin'ny toerana ambanivohitra na tsy dia fantatra loatra manerana an'i Etazonia araka ny takian'ny Lalàna momba ny fampiroboroboana ny dia. Ny 63% dia mitsidika fanjakana iray monja mandritra ny fitsidihan'i Etazonia, izay ampitahaina amin'ny 76% amin'ny firenena any ivelany rehetra. Amin'ireo tombana ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny 13 tapitrisa voapaika tamin'ny taona 2019, India no mitana ny laharana fahefatra amin'ny ankamaroan'ny alina ao amin'ny tsena rehetra. Ny tanjon'ny dia lehibe indrindra dia ny asa aman-draharaha amin'ny 35% an'ny mpitsidika rehetra amin'ny taona 2019 - avo lenta 3 avo heny noho ny salan'isa amin'ny firenena any ivelany rehetra. Ny tanjon'ny dia lehibe hafa dia ny VFR (mpamangy namana sy havana); fialan-tsasatra / fialantsasatra; ary ny fandraisan'anjaran'ny fivoriambe, fihaonambe na fampiratiana.
Amin'ny famaranana ny fivoriana virtoaly dia tsy nisy valiny mazava tamin'ny fanontaniana lehibe iray: Rahoviana no hosoloina ny tena izy?
Bokotra Fanairana Ara-pitsaboana Smart Vaovao eny an-tsena